Burmese taste - Iora: ကြက်ဆင်ကုန်းဘောင်၊ တုိုဟူးသုပ်၊ ရွှေပဲညွန့် အစိမ်းသုပ် နဲ့ငါးခေါင်းဟင်းချို
ကြက်ဆင်ကုန်းဘောင်၊ တုိုဟူးသုပ်၊ ရွှေပဲညွန့် အစိမ်းသုပ် နဲ့ငါးခေါင်းဟင်းချို
ကြက်ဆင်ကုန်းဘောင်၊ ရွှေပဲညွန့် ဟင်းချို၊ တိုဟူးသုပ်
Thanksgiving leftover ရှင်းလင်းရေး ဘဲဆုိုပါရစေတော့။ ကြက်ဆင်ရင်ပုံသားတွေကို လှီးဖြတ်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဆီသတ်ပြီး ချက်ပါတယ်။ ဆီနဲနဲမှာ ငရုတ်ခြောက်တောင့်တွေကို အရင် ခပ်ကျွမ်းကျွမ်းလေးဖြစ်အောင် ကြော်ပြီးဖယ်လိုက်ပြီးမှဆီသတ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီထဲ့ပြီးတော့ ခရုဆီလေးထဲ့၊ ကြက်ဆင်ထဲ့ပြီးတော့ ကြာညို့ နဲနဲထဲ့ ပြီးတော့ ကြက်သွန်မြိတ်လေးအုပ်လိုက်တာပါဘဲ။ စူပါဖတ်စ်ဘဲ။
တုိုဟူးတုံးဘဲတင်ပေးထားပြီး သုပ်စားတာတွေမတင်ရင်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနော်။ ဒါကတော့မြန်မာသုပ် ရှောက်ရွက်တို့ နံနံတို့ဆီချက်တို့ နဲ့ ချဉ်ငံစပ်သုတ်ထားတာပါ။
ကိုရီးယားပဲပုပ်စေ့ကို ဆီပူနဲ့ နဲနဲလှိမ့်ပြီးမှ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်နဲ့ ထောင်းထားတာပါ။ (ကူးကူးကမျှစ်နဲ့ ထောင်းစားတာကြည့်ပြီး စားချင်နေတာ။) ငါးခေါင်းဟင်းချိုနဲ့ တွဲစားတာပါ။
သူ့ ကို ဗက်ဂျီတခုခုဝယ်ခဲ့ပါလို့ မှာလုိုက်တော့ ရွှေပဲညွန့် တထုတ်ဝယ်လာပါတယ်။ တော်တော်ဖြိုယူရပါတယ်။ ကျမကကြိုက်တော့ တော်သေးတယ်။ ပြီးတော့ အရမ်းလည်းနုတော့ ဘယ်လိုလုပ်လုပ်စားကောင်းနေပါတယ်။ အသုပ်ကတော့ ထုံးစံအတုင်း အဆာပလာတွေထဲ့နယ်ပြီး သုပ်ထားတာပါ။ မြေပဲနဲ့ နှမ်းနဲနဲထောင်းပြီးထဲ့ထားပါတယ် (မြေပဲသိပ်မကြိုက်လို့ နဲနဲဘဲထဲ့ပါတယ်)။ ပုစွန်ခြောက်ထောင်းလည်းထဲ့၊ သံပုရာသီးလေးလည်း ညှစ်၊ ငံပြာရည်လေးနဲနဲထဲ့ ကောင်းမှကောင်း အရီးတောင်းဘဲ။
ရွှေပဲညွန့် တထုတ်မကုန်မချင်း လှဲ့ ပတ်လုပ်စားနေတာလေ။ ငါးခေါင်းဟင်း မချက်ခင် ရွှေပဲညွန့် ဟင်းချိုလည်း ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။
ငါးခေါင်းဆီသတ်ပြီး (ဆီပါလေကာ) မျှစ်ချဉ်ထဲ့၊ ကြက်ဆင်အသည်းအမြစ်တွေထဲ့။ ရေ ဆူထဲ့ပြီးတည်ထား။ ပွက်ပွက်ဆူတော့ နဲနဲကျအောင်ဆက်တည်။ ပွက်နေတုန်း ပြည်ကြီးငါးတွေထဲ့၊ ငါးဆုပ်လုံးတွေထဲ့၊ မျှစ်ချဉ်ကသိပ်မချဉ်လို့ တုံရမ်းအနှစ်တွေ ကော်ထဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ စပါးလင်လည်း ဆီသတ်တဲ့ချိန်မှာ ထုထဲ့ပါတယ်။ (တကယ်တော့ငါးခေါင်းဟင်းမှာ ထဲ့လေ့မရှိပါဘူး။)စားခါနီးကျတော့ ပုစွန်တွေ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတွေထဲ့ပါတယ်။ အချဉ်အငံစိတ်တုိုင်းကျပြင်ပြီး သုံးဆောင်တော့ပေါ့နော်။
အချိုပွဲ အအီပြေ။ ဒိန်ချဉ်ထဲကို အုိုက်စကရင်၊ စပျစ်သီးခြောက်နဲ့ တယ်သီးထဲ့စားတာပါ။ ပူစီနံလည်း ကုိုက်စားလိုက်ပါတယ်။
မတင်ဖြစ်တာကြာနေတော့ ဟင်းပုံတွေလည်း အများကြီးပုံနေပြီ။ စာရေးရမှာပျင်းတော့ခက်တယ်။ အင်းလေ လာလည်တဲ့သူတွေကလည်း ဖတ်ရတာပျင်းချင်ပျင်းမှာပါနော်။း)
ကဲလေ..စာတွေကျော်ပြီး ပုံသာကြည့်ပြီး အားပေးသွားပါတော့ ရောက်လက်စနဲ့ ။
Posted by Iora at 12:51 AM
မဒမ်ကိုး December 15, 2011 at 1:26 AM
jasmine(တောင်ကြီး) December 15, 2011 at 1:28 AM
ငါးခေါင်ဟင်းထက် ကြက်ဆင်သားနဲ့ တိုဟူးသုပ်ကိုကြိုက်တယ် ရွှေပဲရွက်
rose December 15, 2011 at 2:33 AM
Yummy... Yummy, sis ^!^
Want to eat Tofu salad.
ဘေဘီ December 15, 2011 at 2:42 AM
ရွှေပဲညွှန့်သုပ် စားချင်တှာ အိမ်မှာ တထုပ်ကျန်သေးတယ်
လုပ်စားရမယ်။ တိုဖူးကို အဲ့လို သုပ်တာ မစားတတ်ဖူးရယ်
ကြာညို့နဲ့ သုပ်ပေးပါး) ငါးခေါင်းဟင်းချိုလည်း သောက်ချင်ပါ၏
Never feeling bore to read your writing and kyii to your dishes.You can get shwepenyut luckily there,but i can't here.
Aunty Oo December 15, 2011 at 7:30 AM
မိုးငွေ့...... December 15, 2011 at 7:52 AM
ရွှေပဲရွက်ကို ရှမ်းခေါက်ဆွဲထဲပဲထည့်စားဖူးတာ အဲလိုလေး သုပ်ထားတာ စားချင်စရာလေး ဟင်းတွေအားလုံးဂွတ်တယ် ကြက်ဆင်သားမစားဖူးသေးဘူး....။
မြတ်ကြည် December 15, 2011 at 9:40 AM
ညသန်းခေါင်နိုးပြီး ရောက်လာတာ၊ ဗိုက်ဆာပြီးပြန်သွားတယ်။ ဂွီဂွီ :P
san htun December 15, 2011 at 2:55 PM
မီးမီးငယ် December 15, 2011 at 4:18 PM
ဒါနဲ့ သူ့ နဘေးကငရုတ်သီးထောင့်က၊
ညယံ December 15, 2011 at 5:37 PM
တို့ ဟူးသုတ်လေး စားချင်စရာ ..
ရွှေပဲညွှန့် ကို အရင်က ကြော်ပဲစားဖူးဒါ ။ သုတ်မစားဖူးဘူး။ ဒီတခါ ပြန်ရင် စမ်းသုတ်ကြည့်အုန်းမယ်။
Iora December 15, 2011 at 11:45 PM
ကြက်ဆင်နဲ့ ရွှေပဲညွန့် တော်တော်ရှင်းယူရတယ်။ ကြက်ဆင်ကတော့ နောင်နှစ်မှစားဖြစ်တော့မှာပါ။ ရွှေပဲညွန့် ကတော့ မကြာခင်ပြန်စားဖြစ်အုန်းမှာပါ။ တိုဟူးသုပ်ကြိုက်တာချင်းတော့တူနေပြီ။
စားချင်ရင် အကုန်စားသွားကွယ်။ အိမ်ပါသယ်သွားအုန်း..
သိတယ်။ ဘေဘီက ကြာညို့ နဲ့ မှကြိုက်တယ်ဆိုတာ။ ကြာညို့ နဲ့ ပုံမရုိုက်လိုက်မီဘူး။ သူငယ်ချင်းစားတာလေ။ ကုိုယ်က ဘေဘီချက်ထားတဲ့ ငါးသလောက်ဥ စားချင်နေတာ။
You are suchasweet sister. If you don't get it there then you don't have to cook it. done. How nice it is. :D I feel the same way as your comments always make my happy.
အစုံအားပေးသွားလို့ ကျေးဇူး ကျေးဇူး။ အပြင်မှာပါအားပေးနုိုင်ရင်သိပ်ကောင်းမှာနော်။
ရွှေပဲရွက်ကို ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကြိုက်တယ် သိလား။ ကြက်ဆင်သားကတော့ ကြက်သားလိုပါဘဲ။
စာတွေပိနေလား။ တရေးနုိုးဆာသွားတော့ ဘာစားလုိုက်လဲ။
၀ုန်း..ဒိုင်း..ချလွမ်..(စန်းထွန်းသုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နဲ့ လာပြီး ပြန်သွားတာလိုက်ကျွေးလို့ တိုက်မိခုိုက်မိပြီး ပန်းကန်ကျသွားတဲ့ အသံဟုမှတ်)
ကိုယ့်စီမှာ စန်းထွန်း ပို့ စ်အသစ်တင်တာမတက်လို့ လင့်ပြန်ချိတ်တာလည်း ဒီတုိုင်းဘဲ။ ဘေဘီတုို့ စီမှာသွားကြည့်တော့လည်း မတက်ဘူးရယ်။ ဟောင်ကောင်တောလားဘဲ ပေါ်နေတယ်။းဝ
ငရုတ်သီးကရွှေပဲညွန့် ကိုအမြန်သုတ်လို့ ဘေးကဘဲပုံလိုက်တာ။ ညှပ်ထဲ့မှပိုစားကောင်းတာပေါ့။ သူက အစပ်သိပ်မစားချင်ဘူး။
ရွှေပဲညွန့် က နုပြီး တအားလတ်တော့တော်တော်စားလို့ ကောင်းတယ် အစိမ်းသုတ်တော့လေ။ ပျော့ပျော့ကြီးမဖြစ်နေဘူး ကကြွတ်ကကြွတ်နဲ့ ကောင်းတယ်သိလား။
Nyi Linn Thit December 16, 2011 at 7:15 AM
ဒီလိုပွဲမျိုး စောစောစီးစီး ရောက်ရမယ့်ဟာ... ခြေထောက်က သစ္စာဖောက် လုပ်နေပြန် ပါပြီ၊ ကျန်မှ ကျန်သေးရဲ့လား..?း) အသုပ်တွေက အရမ်း စားချင်စရာ ကောင်းတယ်ဗျာ..။
ကောင်းမွန်ဝင်း December 17, 2011 at 4:48 AM
အိုင်အိုရာရယ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ၀ယ်လို့ရတာများတယ်နော်။
အားကျလိုက်တာ... ၀ယ်လို့ရတာကော။ ချက်တတ်တာကော။
ရှက်ရှက်နဲ့ပြောရရင် ပုံကြည့်ရတာအားမရလို့ အိမ်ချင်းသာနီးလိုက်ချင်တော့တယ်။
Iora December 17, 2011 at 6:46 PM
သစ္စာဖေါက်တို့ သွားရာလမ်းကတော့ ရေထုိုးဘဲရတော့မယ်နော်။သိတယ်မှုတ်လား။း) အသုပ်တွေ စားချင်စရာကောင်းရင် စားသွားပါရှင်။
ကိုယ်ထင်တာကတော့ တရုပ်တွေများတဲ့နေရာဆုို အာရှစာတွေ ရလွယ်တယ်ထင်တာဘဲ။ တခြားထက်စာရင် ၀ယ်ရတာတွေများတယ်ဆုိုနုိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်ကမရနုိုင်တဲ့ ဂွေးထောက်တို့ ၊ ဆူးပုတ်တို့ ၊ မန်ကျည်းရွက်တုို့ ၊ ဘူးရွက်တို့ ၊ ဒန့် သလွန်ရွက်တို့ တွေကို တမ်းတနေပြန်ရောကောင်းေ၇။ အိမ်ချင်းနီးလို့ ကတော့ ဘူးနဲ့ ထဲ့ပြီး တချိန်လုံးပေးနေမှာ။ တကယ်။